कहिले खुल्छन् विद्यालय ? – News Of Nepal
नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको महिना दिन वित्न लागिसक्यो । तर लाखौं विद्यार्थीहरु विद्यालय जान पाएका छैनन् । शहरी क्षेत्रमा अनलाइन लगायतका वैकल्पिक माध्यमबाट विद्यार्थीहरुलाई पठनपाठनमा जोड्ने प्रयास भइरहे पनि ग्रामिण क्षेत्रमा त्यो पनि हुन सकेको छैन ।
कोभिड–१९ को दोस्रो लहर केही कम भए पनि अझै नियन्त्रणमा आइसकेको छैन । अहिले पनि दैनिक २ हजार आसपासमा नयाँ संक्रमित भेटिने गरेको छ भने जनस्वास्थ्य विज्ञहरुले तेस्रो लहर आउन सक्ने चेतावनी पनि दिएका छन् ।
कोरोना महामारीका करण शैक्षिक सत्र २०७७/७८ मा पनि मुस्किलले केही साता विद्यालय खुलेको थियो । दोस्रो लहर आएपछि मध्य वैशाखबाट दुई महिना देशका अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा लगाइयो । पछिल्लो समय निषेधाज्ञा खुकुलो बनाइएको छ । होटल, रेष्टुराँ, सार्वजनिक यातायात सबै खुलेका छन् । तर विद्यालयहरु कहिलेबाट र कसरी खोल्ने कुनै टुंगो छैन ।
डा. विद्यानाथ कोइराला भन्छन्- म विद्यालय खोल्ने वा बन्द गर्ने विषयमा जबरजस्ती हुनुहुँदैन भन्ने पक्षमा छु । शिक्षक डराएका छन्, विद्यार्थी डराएका छन्, अभिभावक डराएका छन् भने खोल्नु हुँदैन । किनकि डराएको विद्यार्थी तथा शिक्षकलाई भोलि केही भइहाल्यो भने को जिम्मेवार हुने ?
एन प्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटा पनि विद्यालय सन्चालनको अधिकार पाएको स्थानीय तहले आफ्नो स्थानको अवस्था निर्क्योल गरी निर्णय लिनुपर्ने बताउँछन् । ‘केही स्थानीय तहमा संक्रमणको जोखिम पनि कम छ र अनलाइन कक्षामा विद्यार्थीलाई जोड्न सकिने अवस्था पनि छैन । त्यस्तो स्थानीय तहले विद्यालय कसरी सन्चालन गर्ने भन्ने छलफल तत्काल थाल्नुपर्छ ।’
तर शहरी क्षेत्र र संक्रमणको जोखिम भएको क्षेत्रमा विद्यालयमा भौतिक उपस्थितिमा पठनपाठन शुरु गर्न सकिने अवस्था नभएको एन प्याब्सनको विश्लेषण छ ।
हामी निरन्तर आन्दोलनमा छ र हामीले अघि सारेका ३४ वटा मागमध्ये एउटा शिक्षकलाई अनिवार्य खोप उपलब्ध हुनुपर्ने पनि हो । शिक्षकहरुले खोप नपाएसम्म भौतिक रुपमा विद्यालयमा उपस्थिति हुन सक्दैनौं भन्ने हाम्रो अडान छ । सबैलाई खोप दिने शिक्षकलाई नदिने भनेको ? उपेक्षाको पनि हद हुन्छ नि ! अनलाइनखबरबाट साभार गरिएको